Nahoana no potika i Sodoma sy Gomora? ➡️
Nahoana no potika i Sodoma sy Gomora?. Ny Baiboly dia milaza amintsika ny tantaran'ny tanàna roa naringan'Andriamanitra tamin'ny afo sy solifara. Sodoma sy Gomorra. Ity kaonty ao amin'ny Genesus ity dia mampiseho tanàna roa ota sy heloka no nahazo ny mponina tao. Noho izany, Tsy maintsy naringan'Andriamanitra izy ireo ho ohatra iray amin'ny zavatra mitranga rehefa lasa lehibe loatra ny ota.
Na izany aza, ilaina ny mahatakatra tsara ny zava-nitranga.
1 Fa maninona no potika Sodoma sy Gomora?: Ny tantara
1.1 Abraham sy Lota
1.2 Fandresena an'i Sodoma sy Gomora
1.3 Ny fangatahan'i Abrahama
1.4 Ny sazin'i Sodoma sy Gomora
2 Inona ny fahotan'i Sodoma sy Gomora?
3 Inona no ianarantsika avy amin'i Sodoma sy Gomora?
Fa maninona no potika Sodoma sy Gomora?: Ny tantara
Fa maninona Sodoma sy Gomora no naringan'Andriamanitra
Abraham sy Lota
Tamin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainan'izy ireo dia nandeha samy hafa i Abrahama sy i Lota zana-drahalahiny. Ary Lot dia nonina tao Sodoma sy Lota satria lonaka be ny faritra. Fa ny olona tao amin'ilay faritra kosa dia tena ratsy toetra.
"Ary Abrahama dia nonina nonina tao amin'ny tany Kanana; fa Lota kosa nonina tany amin'ireo tanàna amin'ny lohasaha, ka nanorina ny tobiny akaikin'ny tanànan'i Sodoma. Ny mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy ary tena nanota tamin'i Jehovah.
Genesisy 13: 12-13
Fandresena an'i Sodoma sy Gomora
Rehefa afaka kelikely, dia resy tamin'ny ady ny mponin'i Sodoma sy Gomora. Lasan-ko babo i Lot sy ireo mponina hafa rehetra. Rehefa hitany izay nitranga, Namory miaramila i Abrahama ary namonjy an'i Lotamiaraka amin'ireo mponina hafa tao Sodoma. ny Mpanjakan'i Sodoma dia nanolotra harena tamin'i Abrahama amin'ny fankasitrahana, fa nolavina ny valisoa rehetra, nanomboka Tsy te handoto tena tamin'ny harenan'i Sodoma i Abrahama.
Ary hoy ny mpanjakan'i Sodoma tamin'i Abrama:
"Omeo ahy ny olona ary tazomy ny entana."
Fa namaly i Abrama:
"Izaho dia nianiana tamin'ny Tompo, Andriamanitra Avo Indrindra, mpamorona ny lanitra sy ny tany, fa tsy handray na inona na inona anao aho, na dia ny kofehy na ny kofehin-kapa aza." Ka tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe: "Nampanan-karena an'i Abrama aho."
Genesisy 14: 21-23
Ny fangatahan'i Abrahama
Amin'ny fotoana hafa, ny anjelin'ny Tompo namangy an'i Abrahama ary nilaza taminy fa hanadihady ny heloka bevava tao Sodoma sy Gomora ary Saziko ny vahoaka. Abraham tamin'izay nangataka famindram-po ho an'ny olo-marina izy izay nonina tao amin'ny faritra. Noho izany dia nilaza Andriamanitra fa raha hitany irery Lehilahy marina 10, tsy nety nandringana an'i Sodoma sy Gomora izy.
Avy eo dia nanantona ny Tompo izy ary nanao hoe:
"Haringanao tokoa va ny marina miaraka amin'ny ratsy fanahy?" Angamba misy olo-marina dimam-polo ao an-tanàna. Hofongoranao ve ny olon-drehetra, ary tsy hamela ny helok'ity toerana ity ve ianao noho ny fitiavan'ny dimam-polo marina ao? Sanatria anao ny hanao zavatra toy izany! Vonoy ny marina miaraka amin'ny meloka, ary samy nitovy ny nitondrany azy? Aza manao zavatra toy izany mihitsy! Ianao, izay mpitsara ny tany rehetra, tsy hitsara va ianao?
Genesisy 18: 23-25
Ny sazin'i Sodoma sy Gomora
Na izany aza, tsy nahita lehilahy marina 10. Fa, noho ny fitiavan'i Abrahama, Nandefa anjely roa Andriamanitra mba hamoaka an'i Lota sy ny fianakaviany avy tao Sodoma talohan'ny faharavana, satria izy irery no olo-marina tao amin'io toerana io. Nanasa ireo anjely i Lota (izay toa lehilahy) nandry tao an-tranony alina.
Rehefa tonga ny alina dia vita daholo Nanodidina ny tranon'i Lota ny olon'i Sodoma ary nangataka izy ireo mba hitondra ny vahininy roa naolana. Mbola tsy natory izy ireo rehefa nanodidina ny trano ny lehilahy avy tao Sodoma. Tao daholo ny olona tsy an-kanavaka, na antitra na antitra. Niantso an'i Lota izy ireo ary nanao hoe:
"Aiza ireo lehilahy tonga nandry tao an-tranonao?" Ario izy ireo! Te hiara-matory amin'izy ireo izahay!
Genesisy 19: 4-5
Nanandrana nisakana azy ireo i Lota, saingy nahery setra ireo lehilahy ireo. dia anjely maratra lehilahy jamba ary nandroaka an'i Lota sy ny fianakaviany tsy ho ao an-tanàna. Nandositra izy ireo ary noravan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora.
Avy ny orana sy solifara nandatsaka an'i Sodoma sy Gomora, manimba ny zava-drehetra. Ny ampitso maraina dia nijerijery ny lainy i Abrahama ary nahita setroka matevina nipoitra avy tamin'ny tany fotsiny.
Ary tonga tany Zoara Lota nony maraina ny andro. Ary Jehovah nandatsaka ranonorana sy solifara avy tany an-danitra tamin'i Sodoma sy Gomora. Ary noravany ireo tanàna ireo sy ny mponina rehetra ao aminy, ary ny tany lemaka sy ny zava-maniry rehetra amin'ny tany.
Genesisy 19: 23-25
Inona ny fahotan'i Sodoma sy Gomora?
Ny olona tao Sodoma sy Gomora dia nanao fahotana maro izay nanjary nandrava azy ireo. Tsy maty noho ny fahotana fotsiny izy ireo. Maty izy ireo satria nandao tanteraka ny fahatsarana izy ireo ary ny rariny, manolo-tena tanteraka hanota.
Ny sasany amin'ny fahotan'i Sodoma sy Gomora voalaza ao amin'ny Baiboly dia:
Herisetra sy fahalotoam-pitondrantena.
Ary toy izany koa Sodoma sy Gomora ary ny tanàna mifanakaiky dia nanjary lesona, miaritra ny sazin'ny afo maharitra mandrakizay, satria nanao fahavetavetana sy fahavetavetana mifanohitra amin'ny natiora. Joda 1:7
Menatra: tsy nahatsapa ny filàna hanafina ny fahotany izy ireo.
Ny faharatsiany ihany dia miampanga azy ireo, Ary, tahaka an'i Sodoma, nirehareha ny amin'ny fahotany izy ireo, ary tsy nafeniny akory izany! Lozany! Isaia 3: 9
Fiavonavonana sy fanamavoana ny sahirana.
Sodom rahavavinao sy ny tanànany dia nanota noho ny avonavona, ny hatendan-kanina, ny tsy firaharahana ary ny tsy firaharahana ireo mahantra sy mahantra. Nino ny tenany ho ambony noho ny hafa izy ireo, ary teo imasoko dia nanao fanao maharikoriko izy ireo. Izany no antony nandraisako azy toy ny nahitanao azy. Ezekiela 16: 49-50
Inona no ianarantsika avy amin'i Sodoma sy Gomora?
Ohatra iray koa ny fandringanana an'i Sodoma sy Gomora. Toy ny nandravana an'i Sodoma sy Gomora, dia indray andro any, Andriamanitra dia hanasazy ny olona rehetra. Hanao ny rariny Andriamanitra.
Ho fanampin'izany, nomelohiny ny tanànan'i Sodoma sy Gomora, ary nanjary lavenona izy, nataony lesona ho an'ny ratsy fanahy. 2 Petera 2: 6
Ho azon'ny ratsy fanahy izay mendrika azy, Fa Andriamanitra koa dia manana hery hiarovana ny marina. Namela ny helok'i Lota Andriamanitra ary mamela ny helony koa ireo izay tia azy, mandà ny ota manodidina azy ireo.
Etsy ankilany kosa dia nanafaka an'i Lota marina Izy, izay tototry ny fiainana tsy voafehin'ireto olon-dratsy ireto, satria ity olo-marina ity, izay niara-nonina tamin'izy ireo ary tia izay tsara, isan'andro dia nahatsapa ny fanahiny noviravirain'ny asa ratsy nahita sy nandre izy. Izany rehetra izany dia mampiseho fa hain'ny Tompo ny manafaka ireo izay miaina araka izay tian'Andriamanitra amin'ny fitsapana, ary mitahiry ny ratsy fanahy hanasazy azy amin'ny andro fitsarana.
2 Petera 2: 7-9
Manantena izahay fa azonao izao ny antony nandravana an'i Sodoma sy Gomora Andriamanitra ô. Tadidio foana fa ny ota no hanalavitra anao AZY.